पहिलो खेलमा हारेको नेपाल आज भारत 'ए' टिमसँग खेल्दै ! - पहिलो खेलमा हारेको नेपाल आज भारत 'ए' टिमसँग खेल्दै !
पहिलो खेलमा हारेको नेपाल आज भारत ‘ए’ टिमसँग खेल्दै !
२०७५, २९ भदौ, 02:26:41 AM
दिल्ली । १९ वर्षमुनि एकदिवसीय क्रिकेट अन्तर्गत आज नेपाली युवा टोलीले आफ्नो दोस्रो खेल भारत ‘ए’ टोलीसँग खेल्दैछ । भारतीय क्रिकेट बोर्डको निमन्त्रणामा भएको उक्त एकदिवसीय शृंखलाअन्गर्ततको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले विजय लक्ष्यसाथ भारतको ‘ए’ टोलीसँग शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो ।
नेपाली टोलीमा आसिफ शेख कप्तान, तृतराज दास, रवी शाह, विपीन रावल, लोकेश बम, रित गौतम, पवन सर्राफ, किशोर महतो, रसिद खान, भीम शार्की, कमलसिंह ऐरी, सन्दीप जोरा, सागर ढकाल, अरुण ऐरी र सम्साद आलम छन् ।